ASAN-JIOLAHY : Mpanendaka iray maty notifirin’ny polisy tetsy Bemasoandro
Niteraka savorovoro teo amin’ny fianakaviany sy ireo mpilalao baolina lavalava teny Bemasoandro, ny sabotsy teo, ny fahafatesan’i Rasta satria nilaza izy ireo fa tsy jiolahy ity farany. 4 décembre 2017
Ny alin’ny zoma hifoha sabotsy tokony ho tamin’ny 12 ora sy sasany teo dia nisy olona telo voaendaka teny Bemasoandro Itaosy ka ny finday, firavaka sy vola teny amin’izy ireo dia voaroba avokoa. Ny iray tamin’ireo lasibatra kosa tsy nisy na inona na inona teny aminy ka noratrain’ireo olon-dratsy, raha ny fitantaran’ireo niharan-doza tamin’ny mpitandro filaminana namonjy azy ireo.
Fotoana vitsy taorian’izany anefa dia nisy Polisy nanao fisafoana teny amin’ny manodidina ka natao ny fikarohana ireo jiolahy. Tsy lasa lavitra akory dia tsikaritra izy telo lahy nahavanon-doza, raha vao nahatazana ilay olona voaendaka sy Polisy ireto farany dia nandositra, araka ny loharanom-baovao. Nifanenjehan’ireo mpitandro filaminana ary tratra ny roa fa ny iray ambiny kosa tafaporitsaka.
Nandritra ny fitondrana azy ireo anefa dia nikasa nandositra ihany koa ny iray ka nanao fampitandremana tamin’ny alalan’ny tifi-danitra mba hijanonany ny Polisy saingy tsy nijanona mihitsy ity farany, araka ny tatitry ny Polisy. Voatery nitifitra ireto farany rehefa tsy nijanona ny tovolahy ary lavo tamin’ny tany. Mbola nentin’ireo Polisy namonjy hopitaly ity farany saingy tonga teny an-toerana tsy tana ny ainy. Ankoatra izany dia nanamafy ireo voaendaka fa anisany nanendaka azy telo io maty io.
Voalaza fa efa nahazoan’ny Polisy loharanom-baovao fa mpanendaka i Rasta ary amin’ireny fitohanan’ny fiara eny amin’ny manodidina an’Ampasika sy Itaosy iny ny tovolahy no tena manao ny asa ratsiny ary amin’ny resaka fanafihana mitam-piadiana sy vaky trano.